Ndị Galeshia 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Galeshia 4:1-31
4 Ma m na-asị na ọ bụrụhaala na onye nketa ahụ bụ nwa ọhụrụ, ọ dịghị iche ma ọlị n’ebe ohu nọ,+ ọ bụ ezie na ọ bụ onyenwe ihe niile, 2 ma ọ nọ n’okpuru ndị na-elekọta ọrụ+ nakwa n’okpuru ndị na-elekọta ụlọ ruo ụbọchị ahụ nna ya kara aka tupu oge eruo. 3 N’otu aka ahụ, anyị onwe anyị kwa nọgidere na-abụ ohu nke ihe ndị mbụ+ nke ụwa mgbe anyị bụ ụmụ ọhụrụ. 4 Ma mgbe oge ahụ dum zuru,+ Chineke zipụrụ Ọkpara ya,+ bụ́ onye nwaanyị mụrụ,+ bụrụkwa onye nọ n’okpuru iwu,+ 5 ka o wee tọhapụ ndị nọ n’okpuru iwu+ site n’ịzụrụ ha,+ ka anyị onwe anyị wee bụrụ ndị e doro ịbụ ụmụ.+ 6 Ma ebe ọ bụ na unu bụ ụmụ, Chineke ezitewo mmụọ+ nke Ọkpara ya n’ime obi anyị, ọ na-etikwa mkpu, sị: “Aba, Nna!”+ 7 N’ihi ya, ị bụkwaghị ohu kama nwa; ọ bụrụkwa na ị bụ nwa, ị bụkwa onye nketa site na Chineke.+ 8 Otú o sina dị, mgbe unu na-amaghị Chineke,+ ọ bụ mgbe ahụ ka unu bụ ohu nke ndị na-abụghị chi n’ezie.+ 9 Ma ugbu a unu maara Chineke, ma ọ bụkwanụ ebe unu bụ ndị Chineke maara,+ olee otú unu si na-agaghachi n’ihe mbụ+ ndị na-adịghị ike na ndị na-enweghị isi+ ma na-achọ ka unu bụrụ ohu ha ọzọ?+ 10 Unu na-edebesi ụbọchị+ na ọnwa+ na oge a kara aka na afọ ike. 11 Egwu unu na-atụ m, na adọgbuwo m onwe m n’ọrụ n’efu+ banyere unu, ma eleghị anya. 12 Ụmụnna m, ana m arịọ unu, Dịrịnụ otú m dị,+ n’ihi na ọ dị mgbe m dịkwa otú unu dị.+ Unu emeghị m ihe ọjọọ ọ bụla.+ 13 Ma unu maara na m ziri unu ozi ọma n’oge mbụ+ n’ihi ọrịa nke na-arịa m n’anụ ahụ́. 14 Ọ bụ ezie na ọrịa m nwere n’anụ ahụ́ m bụụrụ unu ọnwụnwa, unu elelịghị m ma ọ bụ gbụpụ ọnụ mmiri n’ihi ịsọ m oyi; kama unu nabatara m dị ka mmụọ ozi+ Chineke, dị ka Kraịst Jizọs.+ 15 Oleezi ebe obi ụtọ ahụ unu nwere dị?+ N’ihi na m na-agbara unu àmà na, ọ bụrụ na o kwere omume, unu gaara aghụpụta anya unu nye m.+ 16 Ebe ọ dị otú ahụ, àghọwo m onye iro unu+ n’ihi na m na-agwa unu eziokwu?+ 17 Ihe mere ha ji were ịnụ ọkụ n’obi na-achọ unu+ abụghị ihe ọma, kama ha na-achọ ikewapụ unu n’ebe m nọ, ka unu wee were ịnụ ọkụ n’obi na-achọ ha.+ 18 Otú ọ dị, ọ dị mma ka e were ịnụ ọkụ n’obi na-achọ unu maka ezi ihe+ n’oge niile, ọ bụghịkwa naanị mgbe mụ na unu nọ,+ 19 ụmụntakịrị m,+ unu ndị ọ bụ n’ihi ha ka m nọ n’ihe mgbu nke ịmụ nwa ọzọ ruo mgbe a kpụrụ Kraịst n’ime unu.+ 20 Ma ọ dị m ka ya bụrụ na mụ na unu nọ nnọọ ugbu a,+ m wee na-agwa unu okwu n’ụzọ dị iche, n’ihi na ihe banyere unu gbagwojuru m anya.+ 21 Gwanụ m, unu ndị na-achọ ịnọ n’okpuru iwu,+ ọ̀ bụ na unu adịghị anụ ihe Iwu ahụ na-ekwu?+ 22 Dị ka ihe atụ, e dere na Ebreham mụtara ụmụ abụọ, nwa agbọghọ nke na-eje ozi+ mụụrụ ya otu, nwaanyị nke nweere onwe ya+ amụọrọ ya otu; 23 ma a mụrụ nke ahụ nwa agbọghọ na-eje ozi mụrụ n’ụzọ anụ ahụ́,+ nke ọzọ ahụ nwaanyị nweere onwe ya mụrụ bụ site ná nkwa.+ 24 Ihe ndị a bụ ihe ngosi bụ́ ihe atụ;+ n’ihi na ndị inyom a pụtara ọgbụgba ndụ abụọ,+ nke ahụ sitere n’Ugwu Saịnaị,+ bụ́ nke na-amụ ụmụ nye ịnọ n’ohu, nke bụkwa Hega. 25 Ma Hega nke a pụtara Saịnaị,+ bụ́ ugwu dị n’Arebia, o kwekọkwara na Jeruselem nke oge a, n’ihi na ya na ụmụ ya nọ n’ohu.+ 26 Ma Jeruselem+ nke dị n’elu nweere onwe ya, ọ bụkwa nne anyị.+ 27 N’ihi na e dere, sị: “Nwee ọṅụ, gị nwaanyị aga nke na-adịghị amụ nwa; tie mkpu ọṅụ, tisie ya ike, gị nwaanyị nke ime na-adịghị eme; n’ihi na ụmụ nke nwaanyị a gbahapụrụ agbahapụ dị ọtụtụ karịa ụmụ nke nwaanyị nwere di.”+ 28 Ma ụmụnna m, anyị bụ ụmụ dịịrị nkwa ahụ dị ka Aịzik bụkwa.+ 29 Ma dị nnọọ ka ọ dị mgbe ahụ, nke ahụ a mụrụ n’ụzọ anụ ahụ́ malitere ịkpagbu+ nke ahụ a mụrụ n’ụzọ mmụọ nsọ, otú ahụ ka ọ dịkwa ugbu a.+ 30 Otú o sina dị, gịnị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru? “Chụpụ nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi na nwa ya, n’ihi na nwa nke nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi agaghị eso nwa nke nwaanyị ahụ nweere onwe ya bụrụ onye nketa ma ọlị.”+ 31 Ya mere, ụmụnna m, anyị bụ ụmụ nke nwaanyị ahụ nweere onwe ya,+ anyị abụghị ụmụ nke nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi.+